အလီဘာဘာဟာ တရုတ်မှာ “ဘုံကြွယ်” အသင်းကို မြှင့်တင်ဖွဲ့စည်းမယ်လို့ - Pandaily
Sep 03, 2021, 19:22ညနေ 2021/09/03 20:01:07 Pandaily
Alibaba Group က မၾကာေသးမီက တရားဝင္ စတင္ေၾကညာခဲ့ေသာ ၎၏ “Helicophobilious Top Top Ten Action ” ကုမၸဏီသည္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္မတုိင္မီ စုစုေပါင္း တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ သန္း ၁၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၄.၉ သန္း) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ ဘံုခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ တ႐ုတ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကူညီခဲ့သည္။ Alibaba သည္ Alibaba ကို ေမာင္းထုတ္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕ကိုလည္း တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ျပီး Alibaba Group ၏ CEO ျဖစ္သူ Zhang Yong က အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္
သူဟာ Alibaba အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်မှာဖြစ်ပြီး လုပ်ဆောင်မှုပြီးစီးပါက Top 10 ကို အာရုံစူးစိုက်မှု၊ နည်းပညာတီထွင်မှု၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အရည်အသွေးမြင့်မားမှု၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု၊ စောင့်ရှောက်မှုအားနည်းတဲ့ အုပ်စုတွေနဲ့ ဘုံချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရန်ပုံငွေအဖြစ် စတင်ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Alibaba ၏ အစီအစဉ်အရ ဆယ်လီ အရေးယူမည်
နည်းပညာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးတက်လာပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျသော ဒေသများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ် တည်ဆောက်ရေး အထောက်အပံ့များ
2. အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ကြီးထွားလာရေးကို အထောက်အကူပြု;
3. Promotion Agriculture Industry;
4. SME လုပ်ငန်းများ ပြည်ပဈေးကွက်တွင် လုပ်ကိုင်နိုင်ရေး အထောက်အကူပြု
6. Flexible Employment Group security security
၇. မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ဒေသများတွင် လူများကို ပိုမိုထိရောက်စွာလေ့လာနိုင်ရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းကိရိယာများ အသုံးပြု၍ ကူညီမည်
8. အားနည်းသော အုပ်စုများအပေါ် ထောက်ပံ့မှုနှင့် အကာအကွယ်ပေးမှု အားကောင်းစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း;
9. လူထုကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်; ခ်က္ျခင္း
၁၀. ဘုံချမ်းသာကြွယ်ဝမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေမှ သိန်း ၂၀၀ သတ်မှတ်၍ အဆင့်မြင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု သရုပ်ပြကွက်များ ဆောက်လုပ်ရန်။
ကုမဏီက “ကျွန်တော်တို့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်ထားတာက နိုင်ငံနဲ့ လူမှုဘဝအလုံးစုံ သာယာဝပြောမှသာလျှင် အလီဘာဘာဟာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိမှာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဘုံသာယာဝပြောမှုနဲ့အတူ ပံ့ပိုးကူညီဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
သန်း ၁၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ အလီဘာဘာဟာ သန်း ၂၀၀ အထိ တက်လာမယ့် ဘုံချမ်းသာဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေတစ်ခုထူထောင်ပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ Zhejiang ဘုံချမ်းသာတဲ့ သရုပ်ပြကွက်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ကာ တိုင်းပြည်အတွက် ဘုံချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ဘုံချမ်းသာမှုကို ဖော်ဆောင်ဖို့ စူးစမ်းလေ့လာနေပါတယ်။
Topics: မြင်ကွင်းအလီဘာဘာဟာ ၂၀၂၅ ခုနှစ် မတိုင်မီမှာ သန်း ၁၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာဖြစ်ပြီး ဘုံချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို အထောက်အကူပြု
Zhang Yong ဟာ လက်ရှိ Alibaba Group ရဲ့ CEO နဲ့ ဥက္ကဌ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အမေရိကန်နဲ့ဟောင်ကောင်က အများပိုင်ကုမဏီတွေမှာ ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပြီး Seal Electric, Silver Thai Retail Group နဲ့ Weibo တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလမှာ ကျန်းယောင်ဟာ Silver Thai Retail Group ရဲ့ ဥက္ကဌလည်းဖြစ်တယ်။
ဂ်န္ကင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ Alibaba အုပ္စု၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး ထိုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ Alibaba Sports Group ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင် တရားဝင် Alibaba Group ၏ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည် ဖြစ်သည်။
Alibaba က ဘဝသစ်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ အဆင့်မြှင့်ရန် စည်းရုံးကြေညာ
Alibaba က ၎၏ ကုမၸဏီမ်ားကို အဓိက အဖြဲ႕အစည္းသံုးခုကို ထိန္းညိႇမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီး ယင္း၏ အဓိကလုပ္ငန္းသည္ တည္ေနရာအေပၚ အေျခခံကာ AutoNavi, Local Life ႏွင့္ Fliggy တို႔ ေပါင္းစည္းကာ လူေနမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို က႑အလိုက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။
ဘံုသာယာဝေျပာေရးကာယကံရွင္ Charity Day Tencent က ယြမ္ေငြ သန္း ၄၃၀ ရရွိ
စက္တင္ဘာ ၅ ရက္က Tencent သည္ ဘံုခ်မ္းသာမ်ား မိတ္ဆက္ သည့္ ပရဟိတေန႔အျဖစ္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ယင္းေန႔သည္ သန္း ၅၀၀ တန္ ပရဟိတ အစီအစဥ္၏ ပထမအသုတ္အျဖစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ေျပးဆြဲသည့္ ေန႔တစ္ေန႔လည္း ျဖစ္သည္။
Industry Sep 06 စက်တင်ဘာ 7, 2021